Hagaha bilowga ah ee qandaraasyada shaqada
Helitaanka helitaanka musharrixiin uqalma inay buuxiyaan jagooyinka ka banaan shirkaddaada waxay noqon kartaa shaqo lafteeda. Markaad hesho murashaxa saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad si rasmi ah u shaqaaleeysid si ay hawsha u dhammaystiraan.
Qandaraasyada shaqadu waa hab fiican oo si rasmi ah loogu qeexo filashooyinka iyo shuruudaha shaqaalaynta cusub. Dukumiintiyadan ayaa gacan ka geysanaya ilaalinta loo-shaqeeyaha iyo shaqaalaha.
Heshiis shaqo oo xoog leh ayaa dejinaya qaabka guusha wuxuuna meesha ka saarayaa jahwareerka dhammaan dhinacyada muhiimka u ah xiriirkan cusub.
Waa maxay heshiiska shaqada? Heshiiska shaqaalayntu waa heshiis qoran oo sharci ah oo sharxaya xidhiidhka shaqo ee u dhexeeya urur iyo shaqaale.
Qandaraasyada shaqadu maaha shuruudo rasmi ah oo loogu talagalay nidaamka shaqaalaynta. ku yimaadaan dhammaan qaabab iyo cabbirro kala duwan. Marar badan, warqad rasmi ah oo dalab ah iyo buug gacmeed shaqaaleSaxiixan ayaa ku filnaan kara dhammaan saldhigyada.
Si kastaba ha noqotee, qandaraasyada shaqaalayntu waxay gacan ka geysaneysaa in meesha laga saaro madmadowga ku jira xiriirka isla markaana si cad loo qeexo waxa laga filayo shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. badiyaa dantaadu waa in la abuuro heshiis rasmi ah.
Aasaaska qandaraasyada shaqada
Shuruudaha heshiiska shaqada waxay u gaar noqon doonaan kiro kasta oo cusub. Waa tan si qoto dheer u fiiri qaar ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee lagu daro qandaraaska shaqada:
Sharaxaadda shaqada, waajibaadka iyo masuuliyadaha
Tani waa qayb muhiim u ah heshiis kasta oo shaqo. Dukumiintiga waa inuu si cad u qeexaa waxyaabaha laga filayo iyo masuuliyadaha booska laga hadlayo.
Halkii aad diirada saari laheyd waajibaadka maalin laha ah ee jagada, diirada sii saar guud waxyaabaha laga filayo iyo masuuliyadaha.
Tusaale ahaan, haddii aad shaqaaleyneyso adeege adeeg, uma baahnid inaad ku darto faahfaahinta sida "qaadashada amarrada macaamiisha "iyo" cunto u keenista miisaska "qaybtan qandaraaska. Dhinaca kale, kuwani waa qaybo ka mid ah shaqada oo iska cad. Mid kale, oo ay ku jiraan faahfaahino badan oo gaar ah ayaa albaabka u furaya shaqaalaha inay dhahaan “shaqadayda ma ahan” marka aad weydiisato inay wax qabtaan.
Shuruudaha shaqada guud ahaan way dhacaan mid ka mid ah saddexda qaybood: waqti-buuxa, waqti-dhiman ama muddo. Laakiin qeexitaanka sharciga ah ee shaqo waqti-buuxa ah way ku kala duwan tahay gobol ilaa gobol. Tusaale ahaan, gobolada qaarkood waxay u qeexaan shaqada waqti-buuxa ah 32 saacadood asbuucii. Shaqada waqtiga-dhiman ah guud ahaan waxay udhaxaysaa 20 ilaa 30 saacadood usbuucii, laakiin way ka yaraan kartaa waxa loo arko inay waqti-buuxa ah gobolkan.Waxaa lagu qeexaa si joogto ah oo aan la cayimin taariikhda uu ku egyahay. Xiriirkani wuxuu yeelan doonaa taariikh cayiman oo bilow ah iyo taariikhda uu ku egyahay qandaraaska. Si ka duwan qandaraasleyaasha madaxbannaan, shaqaalaha muddada-go'an waxaa loola dhaqmayaa sidii shaqaale caadi ah muddada qandaraaska. . Tani waa run gaar ahaan haddii shaqaaluhu shaqeeyo saacado aan caadi ahayn, sida habeennada iyo sabtiyada iyo axadaha. qodob ku saabsan shaqaalaynta “marka la doono” Tani waxay ka dhigan tahay in labada dhinac midkoodna uu joojin karo xiriirka, sabab la’aan ama sabab la'aan, waqti kasta.. Tusaale ahaan, shaqaale badan oo federaal ah looma oggola inay helaan shaqo labaad oo ka hor timaadda waajibaadkooda rasmiga ah. >
Qaybtani waa inay si cad u qeexdaa mushaharka, mushaharka ama komishanka shaqaalaha ee ay hore ugu heshiiyeen labada dhinac. Sidoo kale ku dar waqtiyada lacag bixinta, wixii macluumaad ah ee ku saabsan qaabdhismeedka gunnada ama ikhtiyaarrada sinnaanta ee qandaraaska. Tan waxaa ka mid noqon kara 401 (k) iswaafajinta, Medicare, ilkaha, dheefaha dadka safarka ah, fasax qoys iyo caafimaad, koontooyinka keydka caafimaadka, iwm. shaqaalaynta cusub. Haddii faa'iidooyinkawaa la badali karaa, waxaa ugufiican in laga saaro qandaraaska. In kasta oo aadan u baahnayn inaad bixiso mushahar dhimis, waxay kaa caawin kartaa inaad shaqaalaha fududeysid oo aad uga dhigto mid aad ugu raaxeysanaya saxiixa heshiiska. waajibaadka ka saaran waajibaadka ay ka saran yihiin shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ka dib marka heshiisku dhaco.
Shaqaalaha qaar ayaa laga yaabaa in looga baahdo inay saxeexaan shaacin la'aan, weydiisasho ama tartan la'aan. Tani waxay ka horjoogsanaysaa inay wadaagaan sirta ganacsiga ama ay wax ka xadaan macaamiisha.
Heshiisyada noocan ahi way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay nooca ganacsiga iyo booska laga hadlayo.
Tusaale ahaan, qareen u shaqeeya sharci Shirkada waa laga mamnuuci karaa inay sameysato shirkad u gaar ah 80 kilomitir radius muddo labo sano ah ka dib markay shaqaaleysiiso qodob aan tartan aheyn.>
Had iyo jeer la tasho qareen qandaraasle khibrad leh markaad diyaarinayso noocyada dukumiintiyada si aad u hubiso inay sharci ahaan ku khasban yihiin iyo inaad hesho ilaalinta aad u baahan tahay. Wixii daldaloolo ah ee dukumiintiyadan ah ma istaagi karaan maxkamada. Laakiin shantan aaladood ayaa noloshaada kuu fududeynaya inta hawshu socoto: >
wuxuu hogaamiye ka yahay warshadaha dukumiintiyada sharciga qaanuunka. Waxay ka caawiyaan ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah adeegyada sharciga ee ka bilaabma adeegyada isku-darka illaa dukumiintiyada abuurista. Kaliya $ 39.99 bishiiba, waxaad abuuri kartaa qandaraasyo shaqo inta aad rabto.
Haddii kale, dadka isticmaala mugga hoose waxay isticmaali karaan GantaalQareen $ 39.99 dukumiinti kasta. Laakiin khidmadda bil kasta waa qiime ka wanaagsan, maadaama aad sidoo kale ka faa'iideysan doontid qaar ka mid ah adeegyada qareennada. Waxaad u adeegsan kartaa Garyaqaanka Garyaqaanka NDA-yada, aan tartamayn, codsi la'aanta, iwm.
Iskuday si bilaash ah tijaabada toddobada maalmood ah
ayaa adeeg sharci siisay in ka badan 4 milyan oo macmiil ah iyo in ka badan 2 milyan oo shirkadood, taas oo ka dhigaysa mid xalalka sharciyeed ee ugu caansan ee la heli karo. Barxadku wuxuu la yimaadaa qaabab qandaraasyo shaqo ah oo aad daqiiqado ku habeyn karto. Kaliya ka jawaab dhowr su'aalood oo fudud, oo LegalZoom si otomaatig ah ayey kuugu dhammaystiri doontaa heshiiska shaqada. adigau baahan karaa inta lagu jiro hawsha shaqaalaynta. Waxa kale oo aad la tashan kartaa khabiiradooda sharciga si aad uga jawaabto su'aalahaaga iyo inaad hubiso in qandaraasyadu ay sharci ahaan sax yihiin. Qorshayaasha ganacsi ee 'LegalZoom' waxay ka bilaabmaan $ 31.25 bishiiba
BambooHR waa dhammaan-hal-ku-xallinta kheyraadka aadanaha oo leh qalab loogu talagalay qorista, shaqaalaynta iyo is-dhexgalka shaqaalaha cusub. Softiweerku wuxuu la socdaa qaab saxeexan elektiroonig ah oo kaa caawinaya inaad ka hagaajiso khibrada saaran. Waad u qaybin kartaa qandaraasyada shaqada waxaadna ka ururin kartaa saxiixyada shaqaalaynta cusub si hufan. Marka la isku daro, dhammaan qandaraasyada shaqaalaha iyo macluumaadka kale ee xasaasiga ahwaxaa lagu keydin karaa keydka macluumaadkaaga shaqaalaha ee BambooHR. La xiriir BambooHR qiime iyo demo si aad u bilowdo
Haddii aad diyaar u tahay inaad abuurto qandaraas shaqo laakiin aadan garanaynin meesha aad ka bilaabi lahayd,
PandaDoc ma dabooshay. Waxaad u isticmaali kartaa barmaamijkan si aad u hesho shax qandaraas shaqo oo bilaash ah. Waxa kaliya ee ay tahay inaad hadda sameyso ayaa ah inaad buuxiso waxyaabaha gaarka u ah shirkaddaada iyo kireysigaaga cusub, markaa waad fiicantahay inaad tagto. qalabka shaqada. Software-ku waa xal dhammaystiran maaraynta qandaraaska, sidaa darteed waxaa jira tanno astaamo qabow ah si noloshaadu ugu fududaan. Qorshayaashu waxay ka bilowdaan $ 19 bishiiba, waxaadna isku dayi kartaa si bilaash ah 14 maalmood.
SameecuSign ayaa la odhan karaa waa magaca ugu badan ee laga aqoonsan yahay meesha saxiixa elektarooniga ah. In kabadan 750,000 oo macaamiil ah ayaa u adeegsaday barnaamijkan si ay u fududeeyaan boqolaal milyan oo saxiixyo adduunka ah. Software-ka ayaa kufiican saxeexyada elektarooniga ah iyo qandaraaska maaraynta nolosha. Haddii aad u baahan tahay oo keliya inaad u sameyso hal shaqaale ama aad u baahan tahay inaad ku shaqaaleyso baaxad weyn, DocuSign ayaa kaa daboolay. Qorshayaashu waxay ka bilaabmayaan $ 10 bishiiba waxaadna si bilaash ah ugu tijaabin kartaa tijaabo 30 maalmood ah. , raac tilmaamahan degdegga ah iyo dhaqamada ugu fiican. Bilaw ahaan, talooyinkan fudud waxay noloshaada kuu fududeynayaan.
Trick # 1: Adeegso shax qandaraas shaqoiyada
Ka sameynta dukumeenti sharci ah bog banaan waa cabsi gelin, mana ahan wax aan kugula talin karo si kalsooni leh. Halkii aad ka shaqeyn laheyd intii loo baahnaa, ku bilow qandaraas shaqo tusaale ah. Waxaad dukumiintiyadaan ka heli kartaa daraasiin ilaha internetka ah, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah aaladaha ku qoran horaantii tusahan.
Halkaas , kaliya buuxi shuruudaha iyo shuruudaha shaqada shirkaddaada iyo qofka shaqaalaha ah. Had iyo jeer waad ku dari kartaa, ka tagi kartaa, ama aad sii habeyn kartaa tusaalooyinkan si aad ugu haboonaato baahiyahaaga.
Markaad dhammeysid qaabeynta shaxanka ugu horreeya, dib ayaad dib ugu isticmaali kartaa badankood qandaraasyada mustaqbalka. Macluumaad badan ayaa jiri doona. Xaalado badan, waa uun in la beddelo magaca shaqaalaha, taariikhda uu bilaabayo, iyo faahfaahinta lacag bixinta.wakiilada ilaha shaqaalaha maaha qareeno. Mar kasta oo aad abuurto qandaraas sharci ku qabanaya, waa inaad talo ka raadsataa la taliye sharci.
Dad badan ayaa isku daya inay abuuraan qandaraas shaqo iyaga u gaar ah, laakiin waxay ka tagaan faahfaahinta muhiimka ah ee ganacsiga meeshiisa qatar ku ah. . I Xaaladaha qaarkood, dukumiintiyada aad looma diyaarsho oo waligood ma hor istaagi doonaan maxkamada. Haddii kale, waxaad toos ugula sheekaysan kartaa qareen khadka tooska ah. Xitaa haddii aad rabto inaad sameysato dukumiintiga naftaada, hubi in qareenkaagu uu dib u eego kahor inta uusan u dirin kireysiga cusub ee saxiixa.
Garyaqaanku xoogaa wuu ka qaalisan yahay, laakiin qiimahaani waa mid yar marka loo eego madax xanuunka iyo kharashaadka ka dhalan kara qandaraaska qafiifka ah.
Talo # 3: Ka fiirso shaqada intaadan qorin qandaraaskauma baahnid inaad qandaraas heshid. Waqti badan ayaad ku badbaadin kartaa adigoo ka bood heshiiska gebi ahaanba haddii shaqadu aysan u baahnayn.
Tusaale ahaan, haddii aad maamusho dukaan jalaato maxalli ah oo aad kireysato arday waqti dhiman ah xagaaga, adiga uma baahnid dukumiinti sharciyeed oo rasmi ah oo dheer. Laakiin haddii aad maamusho wakaalad suuq-geyn dhexdhexaad ah oo aad shaqaaleyso CFO cusub, qandaraaska shaqaalaynta ayaa ka habboonaan doonta. sidoo kale ku habboon halkan. Tani waa run gaar ahaan haddii ay tahay macluumaad xasaasi ah.
Talo # 4: Noqo qof dabacsan Waxaa muhiim ah in la fahmo in heshiiska shaqada uusan ahayn mid hal dhinac ah. Labada dhinacba (shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha) labaduba waa ilaalinayaan qandaraaska.wuxuu ku jiraa qandaraas iyaga si dhakhso leh uga faa'iideysanaya, kaliya waxaa la ogaanayaa in qandaraaska uusan mar dambe la kulmin baahidooda mustaqbalka. Laakiin lix bilood ka dib, ganacsigaagu wuu korayaa, waxaad dib u qaabaynaysaa oo aad go'aansatay inaadan u baahnayn shaqada mar dambe. Shaqo ka ceyrinta shaqaalahan sabab la'aan waxaa loo qaadan karaa jebinta heshiiska, ilaa iyo inta shaqaaluhu u noolaanayo ilaa dhamaadka qandaraaskiisa. mustaqbalka. rabto inaad hagaajiso dhinac kasta oo shaqaalaynta iyo geeddi socodka, ka faa'iideyso barnaamijka HR. The barnaamijka ugu fiican HR ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso aqriskaagarutting workflows iyo maareynta nolosha oo dhan shaqaalaha. adag xallinta maareynta qandaraaska
5 waxyaabaha ugu fiican ee kuxiran xiriiriye xiriiriye (+ 3 talooyin si loo kordhiyo iibka)
2021-06-19 14:51:14 | Degel
Ma waxaad raadineysaa isku xirnaanta isku xirayaasha xiriiriyeyaasha ugu fiican ee boggaaga WordPress, laakiin ma hubtid ikhtiyaarka ugu fiican? Suuqgeynta shirkaddu waxay noqon kartaa mid ka mid ah hababka ugu faa'iidada badan ee lagu abuuri karo dakhli dadban Laakiin markii aad ku dhexjirto xiriir...
34 ugu fiican mawduucyada dhacdooyinka wordpress ee 2021
2021-06-19 05:39:32 | Bogga
Waad keydisay kuwa kuhadlaya. Meel ayaad xirtay. Kalandarka waxaa loo qorsheeyay T. Waxaad sameysay liis marti ah waxaadna diyaar u tahay inaad dirto martiqaadyadaada. Hadda waxa lagaa doonayo inaad sameyso waa inaad soo bandhigto dhacdadaada ugu dambeysey, iyo sida ugu fiican ee loo sameeyo taas ma...
8 ugu fiican WordPress WordPress plugins
2021-06-19 05:29:03 | Bogga
Pinterest waxay leedahay ku dhowaad 500 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon bishii, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah baraha bulshada ee ugu wanaagsan adduunka iyo xulashada ugu sarreysa ee wadista taraafikada u qalma boggaaga WordPress. Firfircoone Pinterest xirfadle ah, waxaad ku dhiirrigelin kart...
Tilmaamaha Bilowga ee Shaqooyinka Kheyraadka Aadanaha
2021-06-17 05:35:36 | Degel
Muhiimadda HR ee ganacsiga badanaa waa la dhayalsaday. Waa mid ka mid ah waaxaha ugu muhiimsan maxaa yeelay shaqooyinka ku hoos jira qaybta HR waa qayb muhiim u ah ganacsi kasta. HR waa kireysiga cusub ee barta ugu horeysa ee lagala xiriiro ganacsiga, iyo talaabo kasta oo jidka ku dhacda, oo ay ku j...
Sida loo abuuro miisaaniyad mushahar
2021-06-17 04:50:29 | Degel
Mushahar bixinta ayaa muran la’aan ka mid ah kharashaadka ganacsi ee ugu waaweyn, sida caadiga ah waxaa lagu qiyaasaa ilaa 20% kharashaadka urur. Dayacaadda shaygaan muhiimka ah waxay si dhakhso leh ugu horseedi kartaa qallafsanaan aan la xakamayn karin qiimaha ganacsiga. Iyada oo xoogaa shaqaale ah...
Dib u eegista MyCompanyWorks
2021-06-17 04:05:18 | Degel
MyCompanyWorks wuxuu jiray ku dhowaad labaatan sano. Sanadihii la soo dhaafay, waxay gacan ka geysteen sameynta in ka badan 60,000 ganacsi oo ku baahsan warshado kala duwan oo ku yaal dhammaan gobollada 50. Waxay bixiyaan adeegyo bilow ah oo ganacsi oo loogu talagalay LLC-yada, shirkadaha C, iyo shi...
Waa maxay taako ee html?
2021-06-13 22:09:17 | Bogga
Waxyaabaha badan ee HTML ee aad kala kulmi doonto safarkaaga si aad u hanato dhamaadka-dhamaadka, taako waa mid aad arki doontid badanaa. Laakiin, si ka duwan waxyaabaha kale, sumadda keligeed ma abuureyso nooc gaar ah oo ka mid ah bogga bogga. Marka hore, waxay noqon kartaa jahwareer: waa maxay she...
17 Moodellada Shabakadaha Muusikada ee Fannaaniinta & Kooxaha 2021
2021-06-13 13:58:45 | Degel
Haddii aad tahay farshaxan yaqaan ku muujiya nafsadiisa heesaha soo jiidashada leh, sheybaarayaasha degellada muusikiisteyaasha ayaa kugu habboon adiga. Qalab dhakhso leh oo hufan oo loogu talagalay dhisida degello internet si aad ugu dhiirrigeliso muusikadaada adduunka Qof kasta oo wax ka qabanayay...
15 ugufiican ereyada xubinimada wordpress 2021
2021-06-12 20:15:45 | Degel
Haddii aad hadda bilaabeysid ama horeyba aad uheshay jaanis, adoo adeegsanaya xubinimada WordPress waxaad lacag kaheli kartaa boggaaga oo ka dhigi kartaa mid faa'iido leh. Hadday tahay baloog ay ka kooban tahay waxyaabo gaar ah, barmaamij ku habboon koorso, ama ganacsi ku saleysan rukumasho, wax kas...
40ka sare ee bilaashka ah ee maqaayada 'psd' iyo mockups 2021
2021-06-12 20:08:42 | Degel
Liiska makhaayadaadu had iyo jeer wuxuu ahaan doonaa waxa ugu horreeya ee ay macaamiishaadu fiiriyaan kahor inta aysan xitaa u helin miis ay iyagu iska leeyihiin. Sidaa darteed waa muhiim in la helo menu qeexaya waxyaabaha aad heli karto oo muujinaya qaabka maqaayadaada. In America oo keliya, waxaa ...
15 ka mid ah websaydhada ugu fiican ee is-dhexgalka leh + + sida loo sameeyo mid kuu gaar ah]
2021-06-11 19:42:27 | Bogga
Websaydhyada ugu fiican waxaa loogu talagalay iyada oo maskaxda lagu hayo dadka isticmaala. Websaydhada isdhexgalka waxay si gaar ah ugu fiican yihiin naqshadeynta adeegsadaha. Kaliya maahan shaqsiyaad iyo madadaalo, waxay sidoo kale siiyaan dadka isticmaala khibradooda waxayna ku hagaan macluumaadk...
Waa maxay taako html?
2021-06-11 19:39:53 | Bogga
Waxyaabaha badan ee HTML ee aad kala kulmi doontid safarkaaga si aad ula qabsato dhamaadka hore, taako waa mid aad arki doontid badanaa. Laakiin, si ka duwan walxaha kale, sumadda keligeed ma abuureyso nooc gaar ah oo ka mid ah bogga bogga. Marka ugu horeysa waxay noqon kartaa jahwareer: maxaa shay ...
7 Fikradaha Dhiirrigelinta Maalinta Aabbaha Si Loo Kordhiyo Iibka Xagaaga
2021-06-10 23:00:05 | Degel
Raadinta fikradaha ugu wanaagsan ee dhiirrigelinta Maalinta Aabbaha si kor loogu qaado iibkaaga dukaanka internetka, Maalinta Aabbaha waxay noqotay maalin caan ah oo adduunka oo dhan looga dabaaldego Waxay fursad u tahay caruurta da 'kasta haku dabaaldegaan Aabayaasha meelwalba adigana adiga, taasi ...
23 qaababka ugu fudud ee bootstrap fudud ee istaaga 2021
2021-06-09 16:33:57 | Degel
Waxaan diyaarinay liistada qaababka ugu fudud ee Bootstrap-ka oo raacaya qaabeynta ugu yar iyo saamaynta muuqaalka oo hagaagsan. Waxay ka dhigayaan waxyaabaha aad siineyso qofka booqda hortiisa Fudeydku waa kakanaanta ugu dambeysa. Markaad wax fududayso, waa inaad qabataa shaqo badan oo adag oo caql...
Mawduucyada wordpress ee weriyeyaasha si ay u dhiirrigeliyaan oo uga baxaan mashruucaaga wararka
2021-06-09 16:24:50 | Degel
Ma waxaad raadineysaa mawduucyada ugu wanaagsan ee WordPress ee saxafiyiinta? Cajiib! Waxaa jira fursado badan oo halkaa yaal. Haddii aad tahay qoraa web, suxufi, suugaanyahan, ama kaliya qof jecel inuu wax qoro, muuji dareenkaaga khadka tooska ah. Samee degel wariye casri ah kana caawi sheekooyinka...